Ngwa dị mma karịa Netflix na n'efu kpamkpam Gam akporosis
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịnwe ngwa mbụ nke Netflix n'efuỌ gwụla ma ị debanyere aha maka ọnwa ikpe n'efu, chefuo inweta ụdị ụdị ọ bụla ebe nke ahụ adịghị adị ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume.
Kama nke ahụ, taa, ana m eweta ngwa maka uto nke m dị mma karịa Netflix, nke kachasị mkpa bụ ngwa maka ekiri ihe nkiri na usoro na nkwanye ma ọ bụ ọbụna budata ha ozugbo na ihe niile kpamkpam n'efu.
1 OctoStream na Netflix n'efu na ị gaghị echefu ya
2 Ihe ndi ozo kacha mma na Netflix ma obu n'efu
2.1 Video Amazon Prime
2.3 STARPLAY (gam akporo)
2.13 MiTele (Ngwa na web)
2.14 AtresPlayer (gam akporo na Web)
3 Appflix, ọzọ ọzọ na Netflix na-arụ ọrụ nke ọma
OctoStream na Netflix n'efu na ị gaghị echefu ya
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ nwere akụkọ iwu na vidiyo maka ọrụ ntanetị dị ka HBO, Amazon Prime video ma ọ bụ Netflix, ọ bụ ihe a na-ahụkarị karịa ka anyị chere na ọtụtụ ezinụlọ, ugbu a ha enweghị ike ịkwụ ụgwọ mmefu ahụ na ngwa ndị a chere na anyị kara aka na oge ezumike nke onwe anyị na nke ezinụlọ.
Ọ bụ ya mere m ji ewetara gị ọkwa nke m ga-akwado nke taa bụ kacha mma ngwa, kacha mma free Netflix ọzọ Na na agaghị m akwụsị ịnwa n'ihi na ejiri m n'aka na ị ga-ahụ ya n'anya.
Ngwa a na-ekwu okwu, dịka m kwuputara na aha nke post ahụ n'onwe ya, abụghị onye ọzọ OctoStream, ngwa nwere akara octopus na-acha anụnụ anụnụ, nke mụ onwe m na-eji enweghị nsogbu ọ bụla ma ọ dịkarịa ala otu afọ ma ọ bụ karịa.
Ngwa bụ mmalite ezi uche dị na ngwa ndị ọzọ akwụsịla ịrụ ọrụ ogologo oge gara aga, dika Appflix, MegaDeDe, MasDeDe or PlusDeDe. Ngwa nke nwere otu nkwado Telegram na ọwa, site na nke a na-edebe APKs ruo ụbọchị ma ị nwere ike ibudata nke kachasị mma maka mkpa gị maka n'efu.
Site na njikọ a ị nwere ike ịnweta ọwa nkwado Octostream na Telegram
Site na njikọ a ị nwere ike isonye na otu nkata Octostream.
Site na saịtị abụọ ahụ, ịnweta otu ma ọ bụ faịlụ ọwa, na ịpị aha otu ahụ ma ọ bụ na ozi ahụ agbadoro n'okpuru, ị ga-enwe ike ịnweta ngwa niile nke ebugola na, n'ezie, n'etiti ha ị ga-emerịrị Họrọ ụdị nke ngwa kachasị ọhụrụ, nsụgharị nke taa maka usoro gam akporo TV ga-adaba na ụdị ahụ OctostreamTV_1.5.8.apk mgbe ụdị nkịtị, nke ị wụnye na Smartphone gị ma ọ bụ Mbadamba ụrọ ga-abụ nsụgharị ahụ Octostream 1.6.10.apk.
Enwere ike itinye nsụgharị abụọ ahụ na Smartphone Smartphone ma ọ bụ Mbadamba ụrọ na na Igbe TV na sistemụ arụmọrụ gam akporo, ihe dị iche na apk abụọ a bụ na ngwa a na-akpọ gam akporo TV ka emepụtara iji rụọ ọrụ na nnukwu ngebichi, ihuenyo anaghị emetụ aka nke a ga-eji ya na njikwa, ọ bụkwa ya mere a na-eji ngwa TV gam akporo kachasị maka otu nzube maka iji ya na njikwa naanị.
Ma ntakịrị ihe ị ga-ekwu banyere Octostream, ihe na-akpali akpali n'efu Netflix ọzọ na-arụ ọrụ na usoro nke ikpokọta sava niile na-akwado ihe nkiri na usoro a na-agbasa na isi ọrụ ntanetị na-akwụ ụgwọ taa. Ngwa nke na-arụ ọrụ zuru oke na nke anyị nwere ike ịchọta ọdịnaya kachasị mma nke agbasara na Netflix ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ na-asọpụta dịka HBO, Disney Plus na ọbụnadị ọdịnaya sitere na Movistar.
Imecha gwa ha nke ahụ ngwa gam akporo zuru ezu na Chromecast iji zipu ọdịnaya gaa na Smart TV ma ọ bụ Chromecast anyị, nakwa na o nwere ọrụ nbanye na ngwa ahụ, nbanye nke a na-eme site na track.TV, nbanye nke na-enye anyị ohere ịme ka usoro anyị niile na ihe nkiri anyị gakọrịta na njedebe anyị niile nke anyị tinyere Octostream.
Naanị ihe agbakwunyere na ngwa ahụ bụ mgbasa ozi ihuenyo zuru oke nke dị ihe dị ka sekọnd 20 na nke ahụ na-awakwute gị, dịka iwu zuru oke mgbe ị na-ahọrọ ihe nkesa nke ịchọrọ ile ihe nkiri ma ọ bụ usoro ahụ, ụfọdụ Mgbasa ozi amachibidoro ike mana nke ahụ ka na-enye gị ohere iwepu ụdị otu oge nke 2.99 Euro.
Otu ndị ga - ewepụ mgbasa ozi ruo mgbe ebighi ebi yana ị ga - ewepụtaghachi ọdịnaya ahụ na thumbnail n'onwe ya nke egosiri na nsonaazụ ọchụchọ nke ngwa gam akporo. N'ihe banyere gam akporo TV, ọ ga-ewepu naanị post-ndụ mgbasa ozi maka otu ụgwọ ahụ m kwuru n'elu.
Ihe ndi ozo kacha mma na Netflix ma obu n'efu
Ọ bụ onye kachasị asọmpi nke nnukwu ọrụ ntanetị maka na ọ na-azọ ụkwụ. Ọ bụ n'ezie dị ọnụ ala, yabụ ọ nwere ike bụrụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile ihe nkiri, usoro na ọdịnaya ndị ọzọ maka ụmụaka. Amazon batara n'egwuregwu mara na ọ nwere ike ịbụ # 1 na-achọ ọrụ n'ụwa niile.
Amazon Prime Video nwere usoro nke ụlọ, ọ bụ usoro nke usoro dị ka Bomụ nwoke, Ezi Omume, Chi dị iche iche nke America na nnukwu nchịkọta dị n'azụ peeji ahụ. A na-agbakwunye na nke a nnukwu ndepụta nke fim nke a ọma larịị na nwere ọtụtụ ọdịnaya maka ụmụaka na nke na-atọ ha ụtọ ruo ọtụtụ awa.
Prime Video nwere ọnụahịa kwa afọ nke euro 36, nke ruru ihe dịka euro 3 kwa ọnwa n'ime ọnwa iri na abụọ ahụ.
Ọ na-enye ọnwa 1 n'efu iji nwalee ya tupu ị nweta ya, na-enye ohere ịnweta ọdịnaya niile zuru ezu ozugbo ị nweta ibe ahụ. Can nwere ike tinye n'out oge na ruo 3 ngwaọrụ. Nwere ike nweta ọnwa efu gị nke Prime Video a njikọ
Web: Video Amazon Prime
Ikpoghari mmiri a na-agba agba abiala iji nye ọdịnaya dị mma kachasị mma yana katalọgụ buru ibu. Anyị ga-enwe ike ịnweta ihe nkiri niile nke Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic na ihe niile metụtara ụwa Disney. Otu n'ime ihe ndị dịpụrụ adịpụ bụ usoro Mandalorian, naanị site na mmalite na Disney +, na mgbakwunye na nke a, a ga-enwe ọdịnaya maka ndị debanyere aha.
Na Spain, a tọhapụrụ ya na ọnwa Machị na ọnụahịa mara mma kemgbe ewepụtara ya, anyị nwere ike ịdebanye aha maka euro 6,99 kwa ọnwa ma ọ bụ denye aha kwa afọ maka euro 69,99. Ọ nwere a 7-ụbọchị ikpe oge mara ya na ọ bụrụ na ị na-amasị na-enwe ya na ugwo maka dị iche iche ihe ọ na-enye.
Disney + ga-enye ndị ọrụ ohere ruo oge 4 dị egwu n'otu oge. Ndenye aha ahụ malitere na ọnụ ala dị ala, ebe ọ bụ na ọ nyere nhọrọ ịdenye aha maka otu afọ maka euro 10, nke ruru 59,99 euro. Ọzọkwa na February enwere nhọrọ nke iku ọrụ maka euro 5 pere mpe.
STARPLAY (gam akporo)
Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma maka ngwaọrụ gam akporo iji lelee usoro na ihe nkiri, n'etiti usoro ahụ bụ The White Princess na The Capture, ha abụọ nwere nnukwu ọganiihu kemgbe njem ha, yana ndị ọzọ dịka Act, Power na Pennyworth na ogologo ndepụta dị.
A na-agbakwunye ihe nkiri ọhụụ na usoro pụrụ iche kwa ọnwa, ha dị na ogo HD ma na-enye nbudata iji nwee ike ịhụ ha na-enweghị Internetntanetị ọ bụla, ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị agaa ma ọ bụ gaa ebe na-enweghị mkpuchi. Ọ nwere ezigbo search engine ịchọta usoro na fim.
Ọ nwere oge ikpe nke ụbọchị 7, enwere ike ịkagbu ya n'oge ọ bụla ịchọrọ. Ọnụ ego kwa ọnwa nke ndenye aha bụ euro 4,99 kwa ọnwa.
Amalite igwu egwu
Ọ bụ ikekwe otu n’ime ndị a kacha mara amara, n’agbanyeghi na ọrụ iyi a na-arụ na United States ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbazite ya, anyị ga-eji VPN wee nwee ike ịnụ ụtọ ya na kọmpụta anyị ma ọ bụ ekwentị anyị. Ikwesiri ime nfe na mba ndi ozo ma oburu na ichoro mpi na Amazon, Disney + ma obu Netflix n’onwe ya.
Hulu na-enye ohere ịnweta ihe dị ka ọwa telivishọn 200 na ebe a na-eme ihe nkiri, katalọgụ ahụ na-enyekwa anyị ohere ile ihe nkiri sịnịma, usoro, ihe ngosi nke eziokwu na asọmpi ozugbo anyị nwetara nbanye aha njirimara na paswọọdụ. Enwekwara ọtụtụ ngwugwu nke ọwa eriri USB na igwe onyonyo dị na US.
Ihe ngwugwu a na-akwụ ihe ruru $ 5,99 (5,44 euro iji gbanwee) maka ngwugwu a, ma dabere ma ịchọrọ ngwugwu ọ ga-aga ego nke $ 30-40 ọzọ. Nke imekotaotuugbo reproductions na- abụọ kacha.
Ọ bụ otu n'ime peeji ole na ole na-enye ogo nkwanye ọdịnaya n'efu, na-enye ọrụ ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụ usoro iwu ọzọ, na nke a, anyị ga-achọ VPN ka anyị nwee ike ịhụ ihe niile na-abịa iji nye anyị webụ ozugbo anyị banyere. Ọ na-elekwasị anya na fim na usoro.
Enwere ọtụtụ ihe nkiri na usoro site na ọtụtụ afọ gara aga, na-egosipụta ihe nkiri nke gara nke ọma na Spain dịka Crocodile Dundee (1983), mana ọ bụghị naanị ya, anyị nwekwara ike ịhụ ndị ọzọ dịka Stray Bullets ma ọ bụ Oge na isi peeji.
Enweghị ndenye aha achọrọ, ịnweta n'efu site na VPN.
Egwuregwu ọhụrụ Movistar bụ ịmalite Movistar + Lite, ọrụ anyị nwere ike ịgbazite na-enweghị ọrụ ọ bụla gara aga iji nwee ọ exclusiveụ ọtụtụ ọdịnaya pụrụ iche site na nke a na nyiwe ndị ọzọ. Site na nke a, ọ chọrọ ịdị ka HBO, Netflix na Disney + ndị a kpọtụrụ aha na Spain na mpaghara ndị ọzọ ebe ọ na-arụ ọrụ.
N'etiti nnukwu ọdịnaya ọ ga-enye ozugbo anyị nweta bụ usoro dịka "Game nke n'ocheeze", Mad Men, Orange bụ Black ọhụrụ, oflọ Kaadị na ọtụtụ ndị ọzọ, enwerekwa mmemme dịka La Resistencia nke David Broncano na egwuregwu ihe omume, n'etiti ndị ọzọ ọtụtụ ihe.
Ọrụ Movistar + Lite na-efu euro 8 kwa ọnwa ma kwe ka ọkpụkpọ egwu n'otu oge na opekata mpe ngwaọrụ abụọ n'otu oge. Ọ nwere onyinye iji nwee ike iji Movistar + Lite maka otu ọnwa na efu efu, ihe ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ya wee nọrọ n'elu ikpo okwu ahụ.
Ọ bụ ọrụ nkwanye na-agaghị efu na ndepụta a, ebe ọ bụ na ọ bụ otu kachasị ukwuu maka ọdịnaya niile enyere site na ikpo okwu ozugbo anyị nwetara ohere mbụ site na ndebanye aha. Ogo dị elu karịa n'elu ikpo okwu a, n'agbanyeghị nke a, nke nta nke nta ọ nwere usoro dị elu nke usoro, ihe nkiri na akwụkwọ akụkọ.
Enwere ọtụtụ ihe nkiri dị iche iche dị iche iche dị iche iche, usoro dịka Silicon Valley, The Sopranos, Veep, Chernobyl ma ọ bụ "Egwuregwu nke n'ocheeze" a ma ama, nke ikpeazụ bụ otu n'ime usoro ọrụ nleta kachasị eleta na ọnwa ndị a kemgbe ọrịa ọrịa malitere - 19.
HBO na Spain na-enye oge ikpe nke izu 2 tupu ị nweta ya, n'agbanyeghị na ịnwere ike ịhọrọ ịkpọ ya ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ya kwa ọnwa. Enye ohere playback na 2 ngwaọrụ n'otu oge.
Igwe na-arụ ọrụ ugbu a na Spain yana ezigbo ọrụ gụgharia ya. Dị ka ọrụ ndị ọzọ, ọ na-enye anyị ohere inweta usoro, mmemme, ihe nkiri na ọwa TV nke ọkwa dị elu, katalọgụ ahụ buru ibu ma anyị nwedịrị ike ilele ihe nkiri ahụ ebe ọ bụla anyị hapụrụ ya, n'etiti ọtụtụ ohere ndị ọzọ maka ndị ahịa ya na-egwu egwu.
Ozugbo emere ọrụ a kwa ọnwa, ọ ga-enye gị ohere ịlele ọwa dị ka MTV, Canal Historia, Fox, SyFy ma ọ bụ Nickelodeon, na mgbakwunye na ọwa 12 ọzọ nke 16 nke ọrụ a nwere. Ọ ga-emekwa ka anyị hụ mmemme na usoro nke ọwa ndị ọzọ ama ama na Spain ma ọ bụ mba ọzọ na-agbasa.
Sky Spain, dị ka asọmpi ahụ, na-enye ohere maka ọnwa efu mgbe edebanye aha, mgbe ị nwesịrị ọ ga-efu ihe ruru 6,99 euro kwa ọnwa. Ọ ga-ekwe ka ọkpụkpọ na ngwaọrụ atọ n'otu oge, otu karịa ọrụ ndị ọzọ.
Rakuten kpebiri ịzụta Wuaki.tv, ikpo okwu Spanish nke nwere ọtụtụ ndị ahịa kemgbe ọrụ ịntanetị malitere na beganntanetị. Ugbu a n'okpuru aha Rakuten TV ọ bụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ maka mbido ọtụtụ afọ gara aga ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ ekele maka ndị Japan.
Ọ nwere nnukwu ndepụta nke usoro na ihe nkiri maka ndị na-eto eto, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha na-eme nke ọma na ọha na eze ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe nkiri n'oge ọ bụla naanị site na ijikọ. Rakuten TV nwere ngalaba a na-akpọ Videoclub ebe ị nwere ike ịkwụ ụgwọ iji hụ ọdịnaya naanị, gụnyere ọtụtụ fim na-apụta na sinima na nke enwere ike ịnweta na igbe igbe.
Ọnụahịa nke ndenye aha bụ euro 7,99 kwa ọnwa, ọ bụ ezie na site na ibe ha na-enye ọnwa nnwale n'efu iji nwalee ọrụ ahụ dị ka ọrụ ndị ọzọ na-egwu mmiri na-eme, ọ bụ ezie na ọ ga-achọ ka ị banye data nkeonwe gị Enyele imekotaotuugbo playback na 2 ngwaọrụ.
Ihe na-eduga n'elu ikpo okwu na-enye oge ụfọdụ nhọrọ nke inwe ike ịgbazite ma ọ bụ zụta ihe nkiri vidio dịgasị iche iche dị iche iche, ọdịda adịghị enwe ike idozi ha n'usoro mkpụrụ akwụkwọ ma ọ bụ chọọ site na ụdị, ihe ha ga-edozi ma ọ bụrụ chọrọ inwe ọha na eze.
Ozugbo ị banyere na YouTube.com ị ga-etinye na search engine «Movies» na ọ ga-amalite na-enye gị nhọrọ nke ọtụtụ n'ime ha, na nke a ndị ka elu bụ ọdịnaya kasị choro ndị ahịa, na nke a otu nke «Bad Boys for Life”, 1917, mmiri n'okpuru mmiri ma ọ bụ DoLittle, n’etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọnụ ego ma ọ bụ ọnụahịa nke ihe nkiri ahụ ga-adabere na nke ị họọrọ, dịka ọmụmaatụ Bad Boys for Life nwere ụgwọ mgbazinye nke euro 3,99 na ego nzụta nke euro 9,99, na-enye nhọrọ iji hụ ya na mkpebi dị iche iche, gụnyere 4K.
Web: Ihe nkiri Youtube
O nwere katalọgụ egwuregwu kachasịnụ, ebe o nwetara ikike MotoGP n'ozuzu ya, na mgbakwunye na ọtụtụ egwuregwu egwuregwu dị ndụ, gụnyere ịnwe nnukwu bọọlụ mba ofesi site na ịtinye Premiya na imeri. Njikọ, iko Italiantali, the South American Cup, the J-League, the MLS na ọtụtụ ndị ọzọ football si n'èzí. O nwekwara Euroleague na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ dịka Tenis, Cygba ígwè, wdg.
Ewezuga egwuregwu a niile, ọ gụnyere ọwa Eurosport 1 na Eurosport 2 na HD, ọwa abụọ na-agbasa ozi na anyị ga-enwe ike ịhụ ihe omume ndị ọzọ na-egbu oge, n'etiti ụzọ ndị ọzọ.
DAZN na-enye ọnwa 1 n'efu site na oge a, mgbe ahụ ọnụahịa bụ ọnwa 9,99 ma ọ bụ euro 99,99 maka ndenye aha kwa afọ. O nweghi mgbe ebighi ebi, onye ahia ya nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta ya n'oge obula.
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị zuru ezu gam akporo ngwa n'ihi na ihe niile ọ na-enye ozugbo ngwa na-eji. FuboTV bụ nkwanye ọrụ nwere ike iji na kọmputa, ekwentị mkpanaaka, mbadamba ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ dakọtara. N'ezie, ọ bụ nnukwu ihe ọzọ na Netflix site na itinye ọwa DTT.
FuboTV gosipụtara usoro mba kacha mma, gụnyere Game nke n'ocheeze, Outlander, Shameless, Jane the Virgin, Ọtụtụ ijeri na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-agụnye ọwa Movistar Series nwere ọdịnaya kachasị mma, ọwa dị ka Antena 3, TVE-, Neox, Nova, Teledeporte, La Sexta na ọtụtụ ndị ọzọ dị. A ga-agbakwunye ihe a niile onyinye nke egwuregwu ma ọ bụrụ na ihe ndị ae kwuru n'elu dị obere nye gị ma na-enye ohere ịdekọ oge 30 maka ịdekọ mmemme ịchọrọ.
Ọ na-enye gị ohere ịnwale ọrụ ahụ n'efu maka ụbọchị 7, mgbe ahụ ụgwọ ego kwa ọnwa bụ euro 2,99.
fuboTV: Usoro, Ihe nkiri na Live TV.
MiTele (Ngwa na web)
Ọ bụ ikpo okwu dijitalụ nke Mediaset Spain, ọ na-enye ọdịnaya na ọchịchọ ma dị ndụ. N'etiti ọwa dịnụ bụ Telecinco, Cuatro, FDF, Energy, Divinity na Be Mad, ha niile nwere ike ịnweta ozugbo ị wụnye ngwa ahụ.
Otu n'ime arụmọrụ ya bụ ịgbakwunye ọdịnaya na ndepụta gị, gbakwunye ọkacha mmasị, belata nchọgharị na ụmụ obere ekele maka njikwa nne na nna ya, lee ọdịnaya ebe ị hapụrụ ya, HD mma nke vidiyo ma ị nwere ike ịmekọrịta na bọtịnụ ON. Ekele maka ọwa ndị a ị ga-enwe ike ịhụ usoro dịka La que se Avecina, Castle, amaara m onye ị bụ, Castle, Grey's Anatomy, Cobra Alert na ezigbo ndepụta nke oge ya niile.
MiTele bụ ngwa nnwere onwe, ọ bụ ezie na enwere nhọrọ nke ịnwe nkwekọrịta MiTele Plus maka euro 3 kwa ọnwa ma ọ bụ euro 30 maka afọ zuru ezu iji kpochapụ mgbasa ozi na ịnweta ọdịnaya naanị, n'etiti ohere nwere ike ịme nkwekọrịta LaLiga, ndị Ndị agbachitere na egwuregwu ndị ọzọ maka ọnụahịa ga-adịgasị iche dabere na ịhọrọ otu mkpọ ma ọ bụ nke ọzọ.
AtresPlayer (gam akporo na Web)
Tinye ọwa telivishọn DTT niile, n'etiti ha bụ isi Antena 3, ọ gụnyere Mega, Neox, Nova, LaSexta na Atreseries, ọwa niile dị ndụ ma ị nwere ike ịnweta ọdịnaya ahụ oge ịhapụ ya, na mgbakwunye na ịnwe ndepụta ka ahụ ya n'usoro.
Ekele maka ọwa ndị a ị nwere ike ịlele akụkọ, opera ncha, ọdịnaya ụmụaka, akwụkwọ akụkọ, mmemme, ihe nkiri, usoro mba na nke mba. A ga-enwe ihe omume egwuregwu ọ bụrụhaala na ọ na-agbasa ha na otu n'ime ọwa ya n'efu.
Atresplayer bụ ngwa n'efu, ị nwekwara ike ịlele ọdịnaya dị na mbadamba nkume gị, kọmputa na ngwaọrụ ndị ọzọ. Atresplayer nọ na-enye Flooxer ruo oge ụfọdụ, nke bụ akaụntụ kachasị elu iji lelee ọdịnaya dị iche iche, opera ncha, akwụkwọ akụkọ, usoro yana ihe nkiri na HD ma ọ bụ 4K. Ọnụ ego Flooxer bụ euro 2,99 kwa ọnwa na euro 29,99 kwa afọ, ọ bụ ezie na ọ na-enyekwa gị ohere ịnwale ya n'efu maka obere oge - enweghị akọwapụta -.
Ikuku ihe eji egwu egwu nke ụwa DC Entertainment na Warner Bros adịla kemgbe. Ọ ga-enye oke nke ike usoro, fim na ọbụna digitized comics na ezigbo mma. Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu onye ofufe nke Justice League, Superman ma ọ bụ Batman fim, o doro anya na nke a bụ nhọrọ kacha mma.
Ọ naghị elekwasị anya na usoro nke ya ma ọ bụ ihe nkiri ya, ha na-ebuputakwa usoro dịka Doom Patrol, Swamp Thing ma ọ bụ Titans, ha niile jisiri ike dọta ọha na eze na US Iji nwee ike iji ya na Spain ị ga-achọ VPN, ebe ọ naghị arụ ọrụ na Spain n'oge a.
Ya kwa ọnwa price bụ $ 7,99 (7,27 euro na mgbanwe). Enwere ike iji ya rụọ ọrụ na ngwaọrụ 2 n'otu oge.
Appflix, ọzọ ọzọ na Netflix na-arụ ọrụ nke ọma
Ihe dị ka Usoro na PelisDroid, nke ahụ bụ maka m ee Ha ka bụ otu n'ime ngwa kachasị mma maka ile ihe nkiri na usoro maka n'efu, ndị a na-ahapụ ọtụtụ ihe a ga-achọ n'ihe gbasara ịmepụta imewe ebe ọ bụ na a hapụrụ ha na ihu na-abaghị uru ma dị anya site na ngwa dịka MasDeDe ngwa o Gbanwee ma ọ bụ nke a ngwa na taa m chọrọ iji gosi na ike ikwu nke ukwuu karịsịa.
Ngwa m choro inye gi taa, ngwa na aza aha AppflixOddly zuru ezu ma ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, anyị ga-enwe ike ibudata ya na Playlọ Ahịa Google Play site na njikọ kpọmkwem m ga-ahapụ n'okpuru usoro ndị a:
Ọ bụrụ n ’oge ị na-agụ ọkwa a, ị chọpụta na ngwa Appflix adịghịzi na Playlọ Ahịa Google n'ihi na ewepụla ya, echegbula n'ihi Site na Androidsis Community na Telegram anyị na-etinye gị na ngwa gị ka ị nwee ike ibudata ya na naanị pịa otu njikọ a ma ọ bụ jụọ onye nhazi ọ bụla nke otu gam akporo kacha mma na Telegram. M na-echetara gị na ndị na-eme nhazi taa bụ @jorgealejo, @Dezfachate, @AdemirFree, @Igihe na onwe m @pakomola.
Appflix na-eji otu sistemụ ahụ dịka SeriesDroid S2 na PelisDroid S2 ọ bụ ezie na iji ihe eji emepụta ihe eji arụ ọrụ na eziokwu dị ezigbo ụtọ ma dịkwa irè karịa ngwa abụọ ndị a nke m tụrụ aro ya nke ukwuu. N'ihi ya, naanị site n'ịgba ọsọ ngwa anyị ga-enweta, na-enweghị mkpa maka ndebanye aha ọ bụla ma ọ bụ ụdị nbanye ọ bụla, na ọtụtụ fim na usoro ntanetị na-ekiri dị ka iyi ma ọ bụ budata ọdịnaya ahụ na njedebe gam akporo anyị.
A dị mma nke ukwuu dị ka kaadị na-ahụ anya site na nke anyị ga-enwe ike ịnyagharịa na ọdịnaya niile akwadoro na sava mpụga na ngwa ahụ.
Na Appflix anyị na-ahụ ihe niile ọdịnaya ahụ edobere na sava dị iche iche dabara adaba iji chọta ma hazie ihe anyị chọrọ ịhụ n'ụzọ dị mfe ma dịkwa n'usoro. A) Eeh anyị nwere isi edemede abụọ dịka Movies na Series, ebe n'ime ha, anyị ga-ahụ ọdịnaya nke ụdị, ọkacha mmasị na nhọrọ akpọrọ Discover ebe anyị ga-atụ aro ọdịnaya nke ndị ama ama, Billboard na Best Rated in the category of Movies, na ndị ama ama, nke enyere taa ma ọ bụ na mbipụta ikpe nke usoro.
Na nke ọ bụla na kaadị na-gosiri anyị ma na udi nke Movies na Series, na elu aka nri akụkụ a obi na-egosi nke dị site na ịpị ya, ọ ga-acha-acha ọbara ọbara, si otú ahapụ fim ma ọ bụ usoro kwadoro na Atiya nke ọkacha mmasị anyị na fim ma ọ bụ usoro ma si otú nwee ike ịnweta akara ọdịnaya na a ukwuu ngwa ngwa ụzọ.
Site na ịpị na kaadị nke ihe nkiri ọ bụla ma ọ bụ usoro ọ bụla, na mgbakwunye na inwe ike ịhụ sava niile nke ihe nkiri ma ọ bụ usoro ahụ kwadoro, yana ogo ma ọ bụ asụsụ, A na-egosikwa anyị ozi gbasara ihe nkiri ma ọ bụ usoro isiokwu a na-ekwu, ohere nke ịhụ ụgbọala na-adọkpụ ma ọ bụ trailers ndị dịnụ iji hụ ma ọ bụrụ na ọ masịrị anyị tupu anyị ahụ ya, ma ọ bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị nke na-atụ aro ọdịnaya dị ka nke ahọpụtara.
Maka ihe niile ahụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, maka m taa ma na-atụnyere Appflix na ngwa ndị ọzọ iji lelee ihe nkiri na usoro maka n'efu, echere m na anyị enweghị mgbagha n'ihu kacha mma ngwa na-ekiri fim na usoro maka free. Enwekwara azịza ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ na nke a Ndepụta ibe ndị yiri nke a Plusdede.
Na nkụnye eji isi mee nke post m hapụụrụ gị vidiyo nke m na-egosi gị n'ụzọ zuru ezu akụkụ niile kachasị mma nke ngwa ahụ yana karịa ihe niile, ana m egosi gị otu esi eji ya n'ụzọ ziri ezi lee ihe nkiri na usoro ntanetị n'efu n'efu ma na ntanetị ma na-enwe ike ibudata ha ka ị hụ ha na-enweghị mkpa njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » gụgharia » Ngwa dị mma karịa Netflix na n'efu
M ga - ebudata ya mana ị machibidoro m na ọwa telegram gị maka ikwu ihe doro anya yana etu ndị nchịkwa gị si eme
Zaghachi ka trouxx
Ndị nchịkwa Androidsis ma ọ bụ ndị na-eme ihe ngosi enweghị atụ ma na-ekele ha ọ ga-ekwe omume maka otu obodo karịrị ndị otu 8300 ịrụ ọrụ.
Ọ bụrụ na amachibidoro gị n'òtù ahụ, ọ ga-abụrịrị maka imebi iwu nke ibikọ ọnụ na ihe karịrị otu oge.
Ọ dị mma na ọ "dị mma karịa Netflix" na n'efu. Kedu ka ị si ejikwa ịkwụ ụgwọ nwebisiinka ndị nwe ha dịka Netflix mere?
Tinye Androidsis Community na Telegram wee budata APK site na ebe ahụ anyị buliri ma nyochaa.
Uuffff n'otu aka ana m ekele oge ịchọta ngwa ọhụrụ ma kwado ha mana enwere m ahụ erughị ala ịhụ ọdịnaya na iwu akwadoghị. Amaara m na ha anaghị atụ m egbe ka m jiri ya mana m na-anọ na Netflix.
Kedu ihe ntanetị. Na-ehichapụ ndepụta m na 3… 2… 1
nnukwu ụlọ ahịa dijo
Achọpụtara m na ọ na-ewute m kpamkpam na ị na-akpọsa ngwa nke na-enye gị ohere mụta ọdịnaya pirated.
Nke a dị ka nke ọzọ ị dere na October 1, 2017 na isiokwu yiri ya: «Mma karịa Netflix na n'efu kpamkpam !!. Ọzọ dị na Google Play Store ».
M na-agwa gị otu ihe ahụ m gwara gị mgbe ahụ:
Ngwa a pere aka mgbe ị wụnye ya na Storelọ Ahịa Play, mana mgbe ị gbalịrị igwu ụfọdụ ọdịnaya ọ na-enye gị njikọ iji wụnye ya ọzọ site na mpụga ụlọ ahịa na ebe ahụ ọ bụrụ na ọ zuru ezu, eziokwu dị ezigbo mma
Efu !!!!!!! Ma ọbụnadị na eriri anya anya m nwere ike ịhụ mmiri mmiri, opekata mpe ebe a na Chile na megabytes ADSL 8 M nwere ike ịhụ Netflix na-enweghị latencies ma nwalee ngwa a na 40 MB nke fiber optics, enweghị m ike ịhụ nkeji 2 nke ihe nkiri ……. .Free !! !!!! hahahaha o ga enwere onwe ya mana o nuru.
Adrián nke Rafael Calzada dere dijo
Ọ naghị arụ ọrụ mgbe ị na-etinye ihe nkiri, ọ na-ekpuchi ihuenyo ma nye gị nhọrọ "gbalịa ma emechaa".
Zaghachi Adrián de Rafael Calzada
Ogbaaghara Egwuregwu 'Akụkọ Ifo nke Runeterra Ugbu A Dị - Njikọ nke Egwuregwu Kaadi Egwuregwu